sheeko jacayl oo dhab ah qaybta 2 aad – ASM Raage
sheeko jacayl oo dhab ah qaybta 2 aad
Posted byabdullahi87 May 15, 2021 May 15, 2021 Posted inwararka somaliga ah
Xaaladoodu waxa ay ahayd dhuudhuumasho. Gabadha ayaa soo waci jirtey waqti gooniya oo ay ku balameen. marka salaadda cishe laga baxo reerkuna kala seexdo ayey soo wac jirtey habeen walba, taleefanka qolka ayey la gashaa, habeenka oo dhan sheeko ayey ku dhamaystaan. Waxa ay garan waayaan habeenku xiliga uu dhamaaaday waxa ay ku baraarugaan eedaanka salaadda subax.
Marar badan ayey isku dayeen in ay waqtiga xakameeyaan oo samaystaan waqti xadidan oo ay sheekadooda ku dhamaystaan laakiin mar walba oo ay waqti isla gooyaan waxay arkayeen hadana iyadoo waagii cadaaday. Fartuun hooyadeed waxa ay ahayd qof wadaad ah oo aan salaadaha midna mid ku darin waxa ayna tukan jirtey salaattul layl inta aan la gaarin salaadda subax. Habeenka oo dhami Ahmed iyo Fartuun cabsi ay maamada ka cabsanayaan ayuu ugu dhaman jirey.
Fartuun reerka Iyada ayaa gabar xoog u ah, subaxii reerka ayadaa shaaha u saarta, canjeeladana u dubi jirta, laakiin siddii ay u baratay Ahmed waxaa ku adkaatay in ay soo toosto haddey soo toostana waxaa ay ku dul hurdootaa jikada. Mararka qaar shaaha ayaa buriya canjeeladuna waa gubataa. Malcaamadda/dugsiga casharka siddii hore deg deg ugama baxdo ileen waa gabar cashar kale habeen kasta loo aqriyee.
Fartuun xaalad adag ayaa lasoo deristay balse xaaleedu waxa uu ka daroo dibi dhal noqday markii hooyadeed ogaatay in ay wiil la sheekaysato. Control iyo xakamayn adag ayaa la saaaray, xariirkii Fartuun iyo ahmed ayaa go’ay.
Fartuun waxaa xayiraad laga saaray isticmaalka taleefoonka. Ahmed jahawareer ayaa ku dhashay, maalin iyo habeen taleefanka ayuu ak fadhiyaa xili walbana waxa uu sugaa wicitaankeeda. Markasta oo la gaaro xiligii ay fartuun soo wici jirtayna taleefanka asaga ayaa la wareega qof kalana uma ogolaado xitaa in la taabto, maskiin!!!! In kasta oo uu dareensanyahay in ay jirto sabab ka celisay fartuun in ay soo wacdo hadana ma oga sida wax u dheceen iyo xaaladda ka jirta dhanka gabadha.
Asagoo xaaladdaas ku jira ayaa waxaa soo wacay gabadhii awelba is bartay Ahmed iyo fartuun waxa ayna la socodsiidey sida wax u jiraan iyo xaaladda fartuun ku sugantahay. Ahmed xaariirkan jacayl waxa uu ahaa kii ugu horeeyey ee uu abid gabar la sameeyo, gabadhana si xad dhaaf ah oo dhab ah ayuu u jeclaaday, sidaa darteed ayuu xaaladd adag u galay, xanuun nafsi ah, mid jireed iyo mid maskaxeedba ayaa la soo dersey. Mudo bil ah ayuu si daran u xanuunsaday waxa uuna noqday manaqane jooga.
lasoco qaybta 3 aad
Bill iyo Melinda: Xaaska Bill Gates oo arrin la yaab leh samaysay furiinka kaddib
(Sawirro) Israel oo ka hadashay sababta ay u burburisay xaruntii Tv-ga Aljazeera ee Gaza